Member of the month: Nomzamo Mzobe | Oxford isiZulu Living Dictionaries
Ikhaya Explore Member of the month: Nomzamo Mzobe
Member of the month: Nomzamo Mzobe
Halala kuNomzamo oyilungu lethu lenyanga!
Siye sathola izihumusho namagama okumangalisayo esichazamazwini esiphilayo kule nyanga. Besifuna ukulibungaza ngale mpumelelo yalo ngokuthi sinike incazelo emfushane ngalo. Lona umsebenzisi ofake amagama amaningi esichazamazwini esiphilayo sesiZulu..
Yini eyakuheha ukuthi ube yingxenye yeSichazamazwi Esiphilayo sesiZulu?
Into eyangiheha kakhulu kulesi sichazamazwi ukuthi ngingutolika futhi ngingumhumishi osebenza ngolimi lwesiZulu nesiNgisi. IsiZulu ulimi engiluthandayo ngakho ngiyathanda ukulusebenzisa ngendlela futhi lesi sichazamazwi siyangikhulisa kulo mkhakha engikuwo ngoba kuningi okuphakathi
Ucabanga ukuthi umphakathi okhuluma isiZulu ungahlomula kanjani?
Ziningi izinto ezingasiza umphakathi kulesi sichazamazwi njengoba abantu abaningi sebabuka kakhulu isiNgisi kuzothi uma ngabe bedinga okuthize ngesiZulu bakuthole kulesi sichazamazwi njengoba siqukethe izinto eziningi. Sibuka isakhiwo, ukusetsenziswa kwamagama kanye nokunye okuningi.
Ngabe unalo igama lesiZulu eliyintandokazi yakho noma isisho? Lisho noma sisho ukuthini?
Isisho engisithanda kakhulu ilesi esithi "thokola themba amathunzi ayewukela" sichaza ukuthi okuhle sekusondele ungalilahli ithemba.
Yiziphi ezinye izinto ongathanda ukuzibona esayithini yeSichazamazwi Esiphilayo?
Ngingathanda ukubona amagama amaningi esiZulu efakwa kanti ukwanda kwamagama kungangijabulisa kakhulu.